Apixaban (Eliquis): isebenzisa, ukusebenzisana, iziphumo ezibi, izilumkiso | AASraw
/Blog/Apixaban/Apixaban (Eliquis): isebenzisa, ukusebenzisana, iziphumo ezibi, izilumkiso
ezaposwa ngomhla 06 / 14 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo Apixaban.
Yonke into ngeApixaban (Eliquis)
3. yintoni eyenziwa nguApixaban
4.Ndifanele ndiyazi ngaphambi kokusebenzisa iApixaban
5. Indlela yokusebenzisa iApixaban / Apixaban esebenzayo
6.I-apixaban ekhuselekileyo ukuthatha ukuba ndikhulelwe okanye ndamncelisa?
7. Ndiza kuthatha ixesha elingakanani ndiyithathe iApixaban
8.Apixaban ukusebenzisana kweziyobisi (apixaban contraindications)
9. Unako ukusela utywala ngelixa uthabatha uApixaban
10.Ukutya okuphi ukukhusela ngelixa ku-eliquis (apixaban)
11. Yiyiphi enye enye into e-eliquis
12.Ungathatha i-paracetamol ngelixa uthatha i-Apixaban
13. Ngaba ungathatha iVitamin K kunye no-Eliquis (apixaban)?
I-14.Ziziphi iziphumo ezichaphazelekayo zokuthatha i-apixaban
15. Yintoni eya kwenzeka xa ndiyeka ukuthatha i-apixaban?
17. Uhlolo lweApixaban
Apixaban powder ividiyo
I.Apixaban powder Abalinganiswa basisiseko:
igama: Apixaban powder
I-molecular Formula: C25H25N5O4
Isisindo somzimba: 459.50
Isitoreji sokugcina: 20 ° C ukuya kwi-25 ° C
umbala: I-White powder-yellow yellow
1. Yintoni e-Apixaban?
Apixaban ( 503612-47-3) yavunyelwa e-US kwi-2014 kunyango kunye neprophylaxis yesibini ye-vein thrombosis (DVT) kunye ne-p
i-embolism yamabolism (PE) .Kwakhiwa kwintsebenziswano ehlanganyelwe nguPfizer noBristol-Myers Squibb. I-Apixaban ithengiswa phantsi kwegama legama (igama le-brand Apixaban) uEliquis. I-Apixaban i-drug-thinning drug, ithathwa ngomlomo. Ingxaki ngqo Xa inhibitor.
2. Yintoni uEliquis?
U-Eliquis ligama le-Apixaban (503612-47-3), i-ELIQUIS (apixaban), i-factor Xa (FXa) inhibitor, ichazwa ngamachiza njenge-1- (4-methoxyphenyl) -7-oxo-6- [4- ( 2-oxopiperidin-1-yl) phenyl] -4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo [3,4c] i-pyridine-3-carboxamide. I-formula yayo ye-molecular is C25H25N5O4, ehambelana nesisindo somzimba se-459.5. I-Apixaban inefomula yolu hlobo lulandelayo:
Iipilisi ze-ELIQUIS (apixaban) - i-Structure Formula
Apixaban ngumhlophe omhlophe obumhlophe. Kwi-physiological pH (1.2-6.8), i-apixaban ayifuni; uhlalutyo lwawo olunobuncwane kumgangatho we-pH womzimba ngu ~ 0.04 mg / mL.
Iipilisi ze-ELIQUIS ziyafumaneka ukulawulwa komlomo kwizikhwepha ze-2.5 mg kunye ne-5 mg ye-apixaban kunye nezithako ezingasebenziyo: i-lactose anhydrous, i-microcrystalline cellulose, i-croscarmellose sodium, i-lauryl sulfate kunye ne-magnesium stearate. Iingubo zefilimu ziqukethe i-lactose monohydrate, i-hypromellose, i-titanium dioxide, i-triacetin kunye ne-yellow oxide (i-2.5 mg tablet) okanye i-oxygen ebomvu yombane (iipilisi ze-5 mg).
3. yintoni eyenziwa nguApixaban?
I-Apixaban i-antiticoagulant yokunyangwa kweemeko ze-venous thromboembolic, iboniswe kule zilandelayo:
IApixaban isetyenziselwa ukunciphisa umngcipheko wee-clots zegazi entliziyweni kunye nezibetho kwizigulane ezine-fibrillation ze-atrial ezingenayo ingxaki kwiintsimbi zentliziyo.
I-Apixaban iphinda isetyenziswe ekuphatheni nasekukhuseleni i-thrombosis enzulu (DVT) kunye ne-pulmonary embolism kwizigulane eziye zanyulwa ukuguqulwa okanye ukuguqulwa kwamadolo.
4. Yintoni endifanele ndiyazi ngaphambi kokusebenzisa iApixaban?
I-Apixaban ingathathwa ngabantu abadala abaneminyaka eyi-18 nangaphezulu.
I-Apixaban ayifanelekanga kwabanye abantu. Xelela ugqirha ukuba:
-Aba neempembelelo zokuthi agixabane okanye aphi na amanye amayeza esikhathini esidlulileyo
-ukuzama ukukhulelwa okanye sele sele ukhulelwe - apixaban inokulimaza umntwana wakho
-ave wayenobungozi bentsholongwane emva nje okanye utyando
-thatha nawaphi na amanye amayeza achaphazela ukugawula igazi, njenge-warfarin
-nokuba naluphi na ukulimala okwangoku uphala ngegazi (njengelonda okanye isilonda sesisu)
-thatha isisombululo samachiza eSt John's wort (esoloko sithathwa ukudandatheka)
Yintoni i Apixaban dosing(apixaban dose) kunye nendlela yokuthatha i-apixaban? Ukusetyenziswa kwe-Apixaban kunokubandakanya njenge-bellow:
· I-apixaban dose evamile kwi-fibrillation ye-asrivular 5 mg ngomlomo kabini imihla ngemihla. Kwabanye abantu be-80 iminyaka okanye ngaphezulu, abanomlinganiselo ongaphantsi okanye olinganayo no-60 kg, okanye kunye nokusebenza kweentso ezincitshisiweyo, umthamo oqhelekileyo ngu-2.5 mg kabini imihla ngemihla.
· Ukhuthaze i-apixaban dose ekuphatheni i-DVT okanye i-pulmary embolism 10 mg kabini imihla ngemihla kwiintsuku ze-7 zokuqala kunye ne-5 mg kabini imihla ngemihla. Emva kweenyanga ezintandathu zonyango, i apixaban doage inokuncitshiswa kwi-2.5 mg nsuku zonke ukwenzela ukukhuselwa kwe-DVT okanye i-pulmary embolism.
· Kubantu abasandul 'i-clot yegazi - ukuba unayo i-clot yegazi phakathi neenyanga ezidlulileyo ze-6, i-apixaban isilinganisi seeritha ezimbini ze-5mg, iphindwe kabini ngosuku, kwiintsuku zokuqala ze-7. Emva koko, uzakuthatha i-5mg tablet kabini ngosuku.
· Xa i-apixaban isetyenziselwa ukuthintela umngcipheko we-DVT emva kokuhlinzwa okanye ukuguqulwa kwamadolo, i-dose ephakanyisiweyo i-2.5 mg qalisa imihla ngemihla i-12 kwiiyure ze-24 emva kokuba utyando lugqityiwe.
· Kuba abantu bayithatha ukunciphisa umngcipheko wegazi elizayo - ukuba unayo i-clot yegazi ngaphezulu kweenyanga ze-6 ezedlulileyo, i-apixaban dosing eqhelekileyo yi-2.5mg tablet kabini ngosuku.
-Apixaban ngaphezu kwamanani
Buza ugqirha wakho okanye i-pharmist ngcebiso ngokukhawuleza njengoko ukugqithisa kweminye kukubeka engozini yokuphuma kwamanzi.
-Apixaban ilahlekelwa amayeza
Thatha iyeza lakho ngokukhawuleza ukuba ukhumbule, ngaphandle kokuba liphantse ixesha elizayo kwiqondo lakho elizayo. Musa ukuthatha i-dose ephindwe kabini ukwenzela umntu olahlekileyo. Thatha umthamo wakho ozayo ngexesha eliqhelekileyo, kwaye uqhubeke ngokuqhelekileyo.
Kubaluleke kakhulu ukuba ukhumbule ukuthatha i-apixaban imihla ngemihla. Ukuba udla ukulibala amanani, kunokukunceda ukumisa i-alamu ukukukhumbuza. Ungaphinde ucele i-pharmist yakho ngcebiso ngezinye iindlela zokukunceda ukhumbule ukuthatha iyeza lakho.
6. Ngaba i-apixaban ikhuselekile ukuthatha ukuba ndikhulelwe okanye ndiyamncelisa?
Akukho zifundo ezaneleyo kwabasetyhini abakhulelweyo. Ukusetyenziswa ngexesha lokukhulelwa kunokunyusa umngcipheko wegazi ngexesha lokukhulelwa nokuziswa. I-Apixaban kufuneka igwenywe ngexesha lokukhulelwa.
Ayaziwa ukuba i-apixaban idityaniswe ubisi lomntu. Oomama abanesihlengikazi kufuneka bayeke i-apixaban okanye bayeke ukunesi.
7. Ndiza kuthatha ixesha elingakanani u-Apixaban?
Kude kube nini udinga ukuthatha i-apixaban kuya kuxhomekeka ekubeni kutheni uyithatha.
· Ukuba uye wagqalwa ukuguqulwa kwamadolo, ngokuqhelekileyo uzakuthatha iipilisi ze-10 kwiintsuku ze-14.
· Ukuba unesithuba sokutshintsha indawo, ngokuqhelekileyo uza kuthatha amacwecwe kwi-32 kwiintsuku ze-38.
· Ukuba unayo i-clot yegazi (i-DVT okanye i-pulmary embolism), ngokuqhelekileyo uza kuthatha i-apixaban ubuncinane kwiinyanga ze-3. Kuxhomekeke kwizinto ezibangele i-blood clot, ungadinga ukuthatha ixesha elide.
· Ukuba une-frill friction, ungadinga ukuthatha i-apixaban ixesha elide okanye
bonke ubomi bakho.
8. Ukusebenzisana kwezidakamizwa zeApixaban (apixaban contraindications)
Ukusebenzisana kweziyobisi (apixaban ingqinano) ingatshintsha indlela amayeza akho asebenza ngayo okanye ukwandisa umngcipheko weemiphumo ezibi kakhulu. Olu xwebhu aluququzeleli konke ukusetyenziswa kweziyobisi. Gcina uluhlu lwazo zonke iimveliso ozisebenzisayo (kubandakanya izidakamizwa / izidakamizwa ezingekho phantsi kweemveliso kunye nemveliso yemveliso) kwaye wabelane ngayo kunye nogqirha kunye nekhemistri. Musa ukuqala, ukumisa, okanye utshintshe umlinganiselo weliphi na amayeza ngaphandle kokuba ugunyaziwe wakho ugqirha.
Ezinye iimveliso ezinokusebenzisana nale nkunkuma zibandakanya: i-mifepristone, ezinye iziyobisi ezingabangela ukuphaphaza / ukutyumla (kubandakanya izidakamizwa ze-antiplatelet ezifana ne-clopidogrel, "igazi elincinci" njenge-warfarin, i-enoxaparin), abathile be-anti-depressants (kuquka ii-SSR ezifana ne-fluoxetine, i-SNRI enjalo njenge desvenlafaxine / venlafaxine).
Amanye amayeza anokuchaphazela ukususwa kwe-apixaban emzimbeni wakho, onokuchaphazela indlela i-apixaban isebenza ngayo. Imizekelo ibandakanya i-azole antitifungals (njenge-itraconazole, i-ketoconazole, posaconazole), i-conivaptan, i-HIV protease inhibitors (njenge-lopinavir, i-ritonavir), i-rifamycins (njenge-rifabutin), i-stort John's wort, iziyobisi ezisetyenziselwa ukuphazamiseka (njenge-carbamazepine, phenytoin), phakathi kwabanye.
Hlola zonke iileyibrari zonyango kwaye zingabhalwanga ngokucophelela kuba amaninzi amaninzi aneengxaki zokunciphisa intlungu / ukunciphisa umkhuhlane (aspirin, ii-NSAID ezifana ne-ibuprofen, naproxen) ezinokunyusa umngcipheko wokulapha xa uthathwa kunye nalo myeza. Nangona kunjalo, ukuba ugqirha wakho uye wakuyalela ukuba uthathe i-aspirin ye-dose ephantsi ukukhusela isifo senhliziyo okanye isifo (ngokuqhelekileyo kumasenti we-81-325 milligrams ngosuku), kufuneka uqhubeke uthabatha i-aspirin ngaphandle kokuba ugqirha wakho akufundise ngenye indlela. Buza ugqirha okanye umseli-mveliso ukuba ufuna iinkcukacha ezingaphezulu.
9. Unako ukusela kotywala ngelixa uthabatha uApixaban?
Kungcono ukuba ungaphuzi utswala obuninzi ngelixa uthabatha le nyilisi. Ukuba ukhetha ukusela utywala, ungaphuzi ngaphezulu kwe-2 isiselo esiqhelekileyo ngosuku. Ungayeki ukuthatha le nyilisi ngaphandle kokukhangela iqela lokunakekelwa kwezempilo kuqala. Tshela abasebenzi ngokukhawuleza ukuba uthathe i-apixaban. Ukuba ukhetha ukusela utywala, ungaphuzi ngaphezulu kwe-2 isiselo esiqhelekileyo ngosuku.
Esinye isiselo esisiselo sithetha:
• 1.5 oz okanye 43 ml yotywala okanye imimoya. Le 40% yotywala.
• 5 oz okanye 142 ml yewayini. Le 12% yotywala.
• I-12 oz okanye i-341 ml yebhiya yamandla rhoqo. Le 5% yotywala.
• Ubhiya obusenyongweni obuphezulu kunye nokupholisa ukutywala kunomthamo ongaphezulu kwesiselo esisodwa
10. Ziziphi ukutya zokuphepha xa u-eliquis (apixaban)?
Gwema ukutya okuphezulu kwiVithamini K, umzekelo, inani elikhulu lemifuno eluhlaza kunye neminye yemifuno yemifuno. Ngamana kufuneka ukuba ugweme utywala, ijusi ye-cranberry kunye nemveliso ene-cranberries.
Igazi elitsha elincinci libizwa ngokuba yiPraxaxa (dabigatran), i-Xarelto (rivaroxaban), i-Eliquis (apixaban), kunye nelo xesha nje, i-Savaysa (edoxaban).
12. Unako ukuthatha i-paracetamol ngeli xesha uthabatha iApixaban
Ukuthatha i-apixaban kunye neengxaki zokuhlaselwa kwansuku zonke. Unokuthatha i-paracetamol ngeli xesha uthatha i-apixaban. Musa ukuthatha i-aspirin okanye ibuprofen ngeli xesha uthatha i-apixaban ngaphandle kokuba ugqirha uthe ulungile. Bandisa amathuba okuphuma.
ukuba uthatha i iziyobisi ezityha igazi, Musa ukuwusebenzisa kwaye ungaqali naluphi na isongezelelo se-vitamin K ngokwakho. Kunoko, thetha nogqirha wakho malunga nokuqala isongezelelo se-vitamin K kwindawo efanelekileyo. Xa uhlolisisa kakuhle iimvavanyo ze-coagulation, unokufumana ukulinganisela phakathi kweenzuzo kunye neengozi zokusetyenziswa kwe-anticoagulant.
Izidakamizwa ezitsha zonyango ezinjenge-Pradaxa (dabigatran) kunye no-Eliquis (apixaban) azichaphazeleka yi-vitamin K entake, oku kuthetha ukuba ungathatha i-vitamin K epheleleyo kwaye ungayithobeli i-anticoagulant effect.
14. Ziziphi iimiphumo ezichaphazelekayo zokuthatha i-apixaban?
ezinye nemiphumela emibi ye-apixaban inokuba yinto enzulu. Ukuba ufumana enye yale mpawu, biza ugqirha wakho ngokukhawuleza okanye ufumane unyango lwezonyango:
ukuphuma ngegazi lomzimba
i-ered, ebomvu, okanye emanzini omchamo
-ebude okanye abamnyama, izitye zokuhlala
-kuhlamba okanye ukuhlanza igazi okanye izinto ezibonakala njengeendawo zekhofi
intlungu okanye ukudibana
ubuhlungu obukhulu okanye ukuqina
ukuvulela ubuso okanye ulwimi
-ieling dizzy okanye iphelile
I-Apixaban ivimbela igazi ukuba lingavali ngokuqhelekileyo, ngoko kungathatha ixesha elingaphezu kwexesha eliqhelekileyo ukuba unqande ukuphuma kwegazi xa unqunywe okanye unzakele. La mayeza (i-apixaban side effects) angakhokelela nokuba utyumle okanye ulawule ngokulula. Biza ugqirha wakho ngokukhawuleza xa ukuphuma okanye ukutyumla kungavamile, kunzima, okanye akunakulawulwa.
I-Apixaban ingabangela ezinye iziphumo ezibi. Biza ugqirha wakho ukuba unayo nayiphi na ingxaki engaqhelekanga xa usebenzisa le mayeza.
Musa ukumthatha i-apixaban ngaphandle kokuthetha nodokotela wakho.
Ukuba uyeka ukuthatha i-apixaban, isantya apho igazi lakho lizakubuyela khona okokuqala ngaphambi kokuba uqalise ukuyithatha - ngokuqhelekileyo phakathi kwelanga okanye ezimbini zokuyeka. Oku kuthetha ukuba unobungozi obunzulu beengxaki ezinjenge-stroke, isifo senhliziyo, i-DVT okanye i-pulmary embolism.
16. Isexwayiso seApixaban
-Uyeke ukuthabatha i-apixaban ngaphandle kokuthetha nodokotela wakho. Ukumisa i-apixaban xa ungafanelanga ukuphakamisa ithuba lamacwecwe egazi. Oku kuquka ukubetha kwabantu abathile. Ungadinga ukumisa i-apixaban phambi kweentlobo ezithile zezinyango okanye unyango lwempilo. Ugqirha wakho uya kukuxelela xa uqala ukuyithatha kwakhona. Landela oko ugqirha wakho akuxelela ngokukufutshane.
-Abantu abanaluphi na uhlobo lwenkqubo yomgulane okanye ye-epidural inokwenzeka ukuba babe neengxaki zokuphaphaza emlanjeni xa sele sele belapha. Ukuphaphaza okungafaneki ukuba kwenzeke, kodwa kunokukhokelela ekubeni ungakwazi ukuhambisa umzimba (ukukhubazeka) ixesha elide okanye ukukhubazeka okungayi kuhamba. Umngcipheko uphakanyiswa kubantu abaneengxaki ngomgudu wabo, uhlobo oluthile lwe-catheter ye-epidural, okanye usebenze ngokuhlinzwa kwamagciwane. Umngcipheko uphakanyiswa kubantu abathatha naziphi na ezinye iziyobisi ezinokuchaphazela indlela igazi eligubungela ngayo njengegazi elincinci legazi (njenge-warfarin), i-aspirin, okanye izidakamizwa ezingabhubhisiyo (i-NSAID). Thetha nogqirha.
-Thetha ugqirha wakho usebenzisa i-apixaban ngaphambi kokuba ube nenkqubo yomgulane okanye yecala. Biza ugqirha wakho ngokukhawuleza ukuba unayo nayiphi na imiqondiso yeengxaki zeentlanzi ezinjengeentlungu zangasemva, ukuphazamiseka okanye ukubetha, ukukhubazeka komzimba, ukukhubazeka, okanye ukulahleka kwesilwanyana okanye isilwanyana.
-Qhagamshelana nogqirha wakho ukuba usandul 'ukuza okanye uza kuba nenkqubo yomgudu okanye yecala. Ixesha elithile lingafuneka kudlule phakathi kokusetyenziswa kwe-apixaban kunye nenkqubo yakho. Thetha nogqirha wakho.
Apixaban luhlobo lonyango olubizwa ngokuba yi-anticoagulant - okanye igazi elincinci. Yenza igazi lakho liphumelele emithanjeni yakho ngokulula. Oku kuthetha ukuba igazi lakho liyakuncipha ukuba lenze igazi legazi eliyingozi.
tags: Apixaban powder, ukuthenga i-Apixaban powder
Yintoni iDivaroxaban powder (Xarelto) Ukusetyenziswa? I-Antineoplastic Agent Monomethyl auristatin E (MMAE)